साकार हुँदै हेमराज भण्डारीकाे विकासकाे सपना
१३ फाल्गुन २०७५, सोमबार १७:५९
धनकुटा । विकास कल्पनाले मात्रै पूरा हुन्छ । जसले विकास गर्ने कल्पना गर्दैन, उ राजनीतिज्ञ बन्न पनि सक्दैन, मात्र स्वार्थी बन्छ । हेमराज भण्डारी पनि स्वार्थी हुन् । यतिमात्र फरक छ, उनी जनताका कामका लागि स्वार्थी बने । त्यही स्वार्थ आज राष्ट्रिय महत्वको विषय बनेको छ ।
राजनीतिज्ञले विकासलाई सँगै जोडेर लैजान्छन् । विकास र राजनीतिलाई सँगै लैजान नेतृत्व मात्रै सफल बन्छन् । उनी राजनीति सँगसँगै विकासलाई पनि डोहोर्‍याउन चाहन्छन् ।
उनले यस्तो सपना देखे, जसलाई पूरा गर्न निरन्तर लागे । सरकारले नै पत्याउन नसकेको योजना बनाए । आफ्नो योजना पूरा गर्न कम्मर कसे । कसैको पनि बहकाउमा लागेनन् । अन्ततः उनको योजना पूरा भयो । त्यो योजना हो तमोर करिडोर ।
धनकुटाको कुरुलेतेनुपामा जन्मिएका हेमराज भण्डारीले धनकुटा सदरमुकाममा आउनु पर्दा त्यही तमोरको किनारै किनार आएर याक्चना घाटको घिर्लिङ तर्नुपर्थो । उनले कयांैपटक तमोरको किनार छिचोले । तमोर नदीको पानी खाए । त्यतिमात्रै होइन, त्यही तमोरको गड्तिरमा नै हुर्किएभन्दा पनि फरक पर्दैन ।
उनी पूर्व मसालमा रहँदा पनि कुशल संगठक थिए । जब उनी २०५६ मा दिनानाथ शर्मासँगै माओवादीमा प्रवेश गरे, त्यसपछि उनका लागि त्यो तमोरको किनार बाँच्ने प्रिय साथीझैं बन्यो । कयांैपटक त्यही किनारबाट आफ्ना जनमुक्ति सेनालाई हिँडाए । संगठनका काममा लाग्दा पनि सुरक्षाकर्मीको आँखा छल्ने माध्यम त्यही किनार थियो ।
जबजब उनी तमोर नदीको किनारमा पुग्थे, त्यो बेला उनको मनमा यो किनारमा कहिले गाडी गुड्ला नि ! भन्ने कुराले पौठेजोरी खेल्थ्यो । चर्को घाम र असुविधा भोग्दा उनी मनमनै कल्पना गर्थे ‘म यो किनारमा अवश्य पनि एक दिन गाडी गुडाएरै छाड्छु ।’
नभन्दै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भएको पहिलो निर्वाचनमा उनी धनकुटा क्षेत्र नं । १ बाट उम्मेदवार बने । अत्याधिक मत पाएर विजयी पनि भए । सभासद भएपछि उनको मनमा उत्साह थपियो । अनि तमोर नदीको किनारै किनार हिँड्दाको दुःखसँगै सिंहदरबारसम्म आइपुग्यो ।
त्यतिबेला संसदीय विकास कोषको रकम सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउँथे । उनले त्यही मौकामा तमोर नदीको किनारै किनार बाटो खोल्ने संकल्प गरे ।
१० वर्षे सशस्त्र युद्धको समयमा माओवादीलाई जोगिन छोटो र सुरक्षाकर्मी नपुग्ने बाटो चाहिन्थ्यो । उनी प्रायः त्यही फर्मुला प्रयोग गर्थे । त्यतिमात्रै होइन, नदी किनार आसपासमा बसोबास गर्ने आम नागरिकको दैनिकी पनि भोग्न पाउँथे ।
उनी जनयुद्धको समयमा त्यही तमोर नदीको किनारलाई साक्षी राखेर ताप्लेजुङको दोभानदेखि काभ्रे जिल्लाको शिरसम्मै यात्रामा निस्किएका छन् । त्यही भोगाईले उनले मनमनै तमोर करिडोरको खाका कोरे । त्यसबेलाको मनको खाका अहिले पूरा भएको छ ।
राजनीतिज्ञको एउटा सपना हुन्छ । तमोर नदीको किनारबाट करिडोर बन्ला भनेर कमैले सोचेका थिए । जबरजस्ती संसदीय कोषको बजेटबाट सुरु भएको बाटो आज करिडोरको रुपमा विकास भएको छ । जसको श्रेय हेमराज भण्डारीलाई मात्रै जान्छ ।
उनले आफ्नो परिकल्पना पूरा गर्न भएभरको शक्ति लगाएका छन् । राजनीतिक जीवनको आधा शक्ति खर्चिएका छन् । यति मात्रै होइन, उनले यस्तो परिकल्पना गरेका छन्, काठमाडौं–ओलाङचुङगोला जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग बनाउने । त्यति मात्रै नभएर मुलघाटबाट त्रिवेणी हुँदै दुधकोशीको किनारै किनार उदयपुरको घुर्मी जोड्ने परिकल्पना गरे । उनकै पहलमा सर्वेसमेत भइसकेको छ ।
उनले तमोर करिडोरलाई १ नं प्रदेशको मुख्य मार्ग बन्ने आशा लिएका छन् । भारतको जोगवनीबाट विराटनगर रानी हुँदै ओलाङचुङगोलासम्म २७० किलोमिटर मात्रै छ । धनकुटाको मुलघाटदेखि तमोर नदिको किनारै किनार करिब १ सय ८० किमिमा तथा विराटनगरको रानी भन्सारबाट चीन वोर्डरसम्मको लम्बाई २ सय ७० कि.मि छ ।
तमोर करिडोर ओलाङचुङगोला–मुलघाट–बराहक्षेत्र सडक आयोजनाको कामलाई अझ अगाडी बढाउन केही समय अगाडी ताप्लेजुङका सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा एक समिति बनेको छ । जसमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटाका सांसदहरू र पूर्व सभासदहरू छन् ।
तमोर करिडोर बन्न सके तमोर जलविद्युत आयोजनाको काम पनि छिटो बढ्न सक्छ भन्ने उनको बुझाइ छ । उनले तमोर करिडोरलाई धेरै सम्भावना बोकेको करिडोरको रुपमा लिएका छन् । उनको बुझाइमा पूर्वका विभिन्न जिल्लालाई काठमाडौं र हेटांैडा जोड्ने सबैभन्दा उत्तम मार्ग बन्छ भन्ने छ ।
उनले भने, ‘यो सडक भारत र चीन जोड्ने नेपालकै सबैभन्दा छोटो मार्ग पनि बन्नेछ भन्ने लाग्छ, यसले धेरै सम्भवना बोकेको छ, यो १ नं. प्रदेशको प्रमुख मार्ग बन्नसक्छ ।’
सधैं नेपालमा सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माणको कुरा चलिरहन्छ । अहिलेसम्मका बस्तीहरु नदी किनारमै छन् । यदि नदी किनारमा राजमार्ग बन्दा सरकारलाई पनि सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माणमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न दबाब पर्छ ।
यो सडक आयोजना गरेर तमोर नदीमा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने उनको सपना छ । त्यति मात्र होइन, काठमाडौंलगायत भारत र चीनकै लागि पनि आकर्षक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ कि भनेर उनी रात दिन भोक प्यास नभनी लागिपरेका छन् ।
Tagsधनकुटा हेमराज भण्डारी